Amandongomane mveliso - China amandongomane abavelisi, abaxhasi
amantongomane esisangqa yenye yamandongomane aqhelekileyo afumanekayo kwaye asetyenziswa neeankile, iibholiti, izikrufu, izitovu, imisonto enomsonto nakwezinye izinto zokuvala ezinemisonto ejija umatshini. I-Flange oko kuthetha ukuba bane-flange bottom.
I-Metric Lock Nuts zonke zinento edala isenzo esingatshiyo "sokutshixa". Ukoyisa iTorque yokuTshixa amantongomane kuxhomekeke ekuguqulweni kwemisonto kwaye kufuneka kucocwe kwaye kucinywe; ayingomachiza kunye nobushushu obulinganiselweyo njengeNylon Faka iitshixo zokutshixa kodwa ukuphinda usebenzise kwakhona kusikelwe umda.
Amantongomane e-Hex yenye yezona ntlobo zixhaphakileyo ezikhoyo kwaye zisetyenziswa nee-ankile, iibholiti, izikrufu, izikhonkwane, imisonto enomsonto nakwezinye izinto zokuvala ezinemisonto ejija umatshini. I-Hex imfutshane ngo-hexagon, okuthetha ukuba banamacala amathandathu
Din6921 esisangqa Amandongomane, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts, I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, Amandla aphakamileyo eHex Bolts, I-Hexagon Socket Head Bolts, Iibholiti,